Wednesday February 17, 2016 - 17:16:02 in Articles by Super Admin
Taariikhda: 16/02/2016: Muqdisho
UJEEDO: WAR MURTIYEED: SIYAASIYIINTA IYO DHAQANKA BEEL WEYNTA LEELKASE.
Kadib shirar kala duwan oo ay beeshu ku yeelatay dhamaan deegaanada ay dagto ee Mudug,Nugaal Bari, xildhibaanada,siyaasiyiinta,ganacsatada iyo qurba joogta dhamaan wadamada caalamka.
Waxay beeshu soo saartay War murtiyeed ka kooban lix (6) Qodob.
1. Beesha leelkase waxay taageersan tahay ku dhaqanka nidaamka 4.5 ilaa laga helayo wax looga gudbo taas oo ah doorasho qof iyo codkiis ah.
2. Beeshu waxay nasiib darro u aragtaa damaca iyo doonista maamulka puntland ee deegaanka iyadoo ku guuldaraysatay muddo 18 sano ah ln ay kasamayso deegaanada ay sheeganayso in ay xukunto cadaalad ayna deegaan wax ugu qaybiso,sidaa daraadeed beeshu waxay u aragtaa doonista Puntland in ay tahay damac khaas ah oo dad gaar ah ku doonayaan sadbursi.
3. Kadib shirar wada tashiyo ah oo mudooyinkii danbe uga socday beesha dalka iyo dibada waxay ku go’aan sadeen in ay qabsadaan shirweyne ay kaga tashan doonaan aayahooda siyaasadeed kaas oo ka dhicidoona gobolka Mudug degmada Galkacyo si dag dag ah.
4. Beeshu waxay u cadaynaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in aysan jirin maamul goboleed ama cid kaloo ku matalaysa wada hadalada siyaasadeed ee dalka ka socda oo aan ka ahayn dowladda federalka Soomaaliyeed.
5. Beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan umada soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan midnimadooda kana fogaadaan waxkasta oo kala fogaynkara.
6. Beeshu waxay ka digeysaa in dowladda federalka Soomaliyeed iyo beesha caalamku ay tixgaliyaan damac dad gaar ah iyadoo laga tanaasulayo danta guud.